N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị njem nleta na-agbalị ịchọta mmasị ndị Africa na-enweghị atụ na ịga leta mba ndị a na-enwetụbeghị mbụ, gụnyere na Etiopia . Iji mee ya n'oge njem na mba ahụ nwere ike ịdị ka ụlọ elu nke dị elu, nke dị na Addis Ababa , na obere ụlọ ezumike, ebe a ga-enye gị naanị kachasị mkpa maka ezumike.
Atụmatụ ụlọ ọrụ na mba ahụ
Na Ethiopia, e nwere ụlọ ọrụ ọha na eze. Ha na-abụkarị ndị isi na ndị agha guzo. A ga-amanye ndị njem nleta na-achọ ka ha nọrọ n'ụlọ nkwari akụ ndị dị otú a karịa ka ndị bi n'ógbè ahụ (mgbe ụfọdụ ruo ugboro atọ). Ọzọkwa, ahịa adịghị egosipụta mgbe niile ọkwa nke nkwari akụ na àgwà nke ọrụ ndị a na-enye. Ụlọ ndị mmadụ bi na Ethiopia, dịka iwu, dị ọcha, dị ọhụrụ ma dị ọnụ ala karịa ụlọ ọrụ ọha na eze.
Nhọrọ kasị mma nke hotels dị n'isi obodo. Ọtụtụ ndị njem na-anọ na mpaghara Piazza. Enwere ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'etiti (ruo $ 20 kwa ụlọ abụọ maka ihe oriri). Isi obodo Etiopia anaghị enwe nsogbu na mmiri na ọkụ eletrik, nke a na-apụghị ikwu banyere obere obodo ndị na-abụghị akụkụ nke ebe ndị njem nleta.
Obodo nke ezigbo ụkpụrụ dị n'obodo ukwu niile nke obodo - na Lalibela , Gondar , Bahr Dar . N'obodo nta, ị nwere ike ịnye ụlọ ọbịa, mgbe mgbe na ọnọdụ Spartan, ọ bụ naanị maka nzube ị ga-eji nọrọ n'abalị ma gaa n'ihu iji merie Etiopia a ma ama.
Ka anyị tụlee ụfọdụ n'ime ụlọ ndị kasị dị oké ọnụ ma na-ewu ewu na Ethiopia:
Ụlọ Ọrụ Marriott (Addis Ababa). Ụlọ nkwari akụ a dị mita 500 site na UNECA Convention Center na 1 kilomita site na National Palace. Ụlọ ndị ahụ nwere ebe obibi na TV, kichin na oven, ngwa ndakwa nri, friji, kettle na toaster, ma e nwere ebe iri nri. Ụlọ nkwari akụ ahụ nwere obere ụlọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, spa, na ebe ntụrụndụ. E nwere Wi-Fi zuru oke na nkwari akụ.
Hotel Sheraton Addis (Addis Ababa). Ọ dị nso na ebe a ma ama nke isi obodo Etiopia - Obí Palace nke Menelik II, Ụlọ Nzukọ ECA, Stadium Addis Ababa, Ụlọ Akwụkwọ Mba na Katidral Atọ n'Ime Otu . N'ime ụlọ nke nkwari akụ a, ị ga-ahụ TV na TV satellite, ekwentị, nchekwa, obere mmanya, ime ụlọ ịwụ. Ụlọ oriri na nkwari akụ Sheraton nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ mmanya, ụlọ ọrụ ogbako, n'èzí na ọdọ mmiri, na ụlọ ahịa. Enweta ohere Ịntanetị dị elu maka ụgwọ.
Hilton Addis Ababa Hotel (Addis Ababa). Nakwa nke ọma na-eje ije n'ebe dị anya site na ebe ndị mara mma nke isi obodo. Akuku ụlọ nkwari akụ ahụ na-agụnye ụlọ oriri na ọṅụṅụ, cafe, 2 Ogwe (na ọdọ mmiri na ụlọ ezumike), ọdọ mmiri (n'èzí na ụmụaka), ebe obibi ahụike, ụlọ ngosi mara mma, spa, sauna, ụlọ ịhịa ahụ. A na-ahazi ụlọ nkwari akụ ahụ maka ndị ahịa, n'ihi ya enwere ọtụtụ ebe maka mkparịta ụka, ọrụ nzuzo, ihe ọdịyo na vidio, ogbako na mgbakọ oriri. Ụlọ ndị ahụ nwere balconies, oyi ikuku, nchekwa, ntutu isi, ime ụlọ ịwụ na ogwe ihe mposi, ekwentị.
Hotel Capital Hotel na Spa (Addis Ababa). Ọ dị nso na etiti obodo, ọdụ ụgbọ elu - njem 10 nkeji. Ụlọ ndị ahụ nwere TV ihuenyo na-ekpuchi, ime ụlọ ịwụ na mposi, ekwentị, kapeeti, Wi-Fi n'efu. E nwekwara ụlọ ahịa, nhicha na ihicha ụlọ na nkwari akụ.
Hotel Ramada Addis Ababa (Addis Ababa). Ọ dị na Bole district, na obi nke isi obodo Etiopia. A na-edozi ụlọ niile nke ụlọ nkwari akụ ahụ nke ọma ma kwadebere, na-ejegharị na elekere. Na mgbakwunye, a na-enye ndị ọbịa Wi-Fi n'efu. Ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mmanya, cafe, ebe obibi ahụike.
Hotel Babogaya Resort (Debreu-Zeyit). Ezigbo ụlọ nkwari akụ maka ịnọ jụụ. Ụlọ ndị ahụ nwere eriri ma ọ bụ TV satịlaịtị, Intanet ngwa ngwa, nchekwa, minibar, ekwentị. Enwere ụlọ maka ndị na-adịghị aṅụ sịga. Akụrụngwa akụrụngwa gụnyere ụlọ ọrụ azụmahịa, ụlọ oriri na nkwari, ebe egwu egwu, ịsa ákwà, ebe ụgbọala, ngwá ọrụ na ohere maka ndị nwere nkwarụ.
Obodo 4 *
Ọnụ ọgụgụ nke hotels nke a dị mma ọkwa na-agụnye ndị na-esonụ:
Hotel Radisson Blu (Addis Ababa). Ụlọ ime ụlọ dị nso nke ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ihe niile ịchọrọ maka ezumike zuru ezu - ụlọ ịsa ahụ na bat ma ọ bụ ịsa ahụ, Wi-Fi n'efu, TV ekpuchi, kettle. Maka ndị ọbịa nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ, e nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ mmanya na spa.
Hotel Golden Tulip Addis Ababa (Addis Ababa). Ọ dị nanị kilomita 2 site n'ọdụ ụgbọ elu nke Bole. Akụrụngwa nke ụlọ nkwari akụ Addis Ababa gụnyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ mmanya, ụlọ ntụrụndụ, na ebe ụgbọala na-adọba onwe ya. Ụlọ zuru oke (ikuku oyi, TV na TV Satellite, minibar, ime ụlọ ịwụ na bat, ịsa ahụ, uwe ime akwa na slippers) ma nwee ohere ịnweta ịntanetị dị elu. A na-esi na ọdụ ụgbọ elu na azụ azụ ọrụ na-aga n'ihu na desktọọpụ, na-akwụkwa n'efu.
Hotel Addissinia (Addis Ababa). Ọ dị n'etiti etiti obodo, ihe dị ka nkeji 8 site na ọdụ ụgbọ elu. Ụlọ ndị a mara mma na-eji TV, minibar, na ụlọ ọrụ kọfị na kọfị. Ndị ọbịa nwere ike ịga na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke mba ụwa, cafe, mmanya, na-eji ọrụ ụgbọelu na-adọba ụgbọala.
Hotel Kuriftu Resort & Spa Bahir Dar (Bahr Dar). Ọ dị n'osimiri Lake Tana . Ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ọnụ ụlọ ya, nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe mara mma. A na-eji ụlọ ndị a na-eme ụlọ nkwari akụ mma, ụdị nke ọ bụla nwere ihu ihu nke na-arị elu na ebe ọkụ. Otu nnukwu uru nke nkwari akụ a bụ ọnụnọ nke oghere n'ime ya na usoro dị iche iche nke ahụike.
Delano Hotel (Bahr Dar). Ọ nwere ebe dị mma na ụlọ ndị dị oke obosara na ihe niile ị chọrọ maka ezigbo ezumike - TV, refrjiraeto, Obere mmanya, ikuku oyi, Wi-Fi n'efu. Ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mmanya, spa, oriri na ọnụ ụlọ nkwakọba ihe, ihicha akọrọ, ụlọ ịsa ákwà, ebe a na-adọba ụgbọala n'efu.
Otutu ụlọ hotels na Etiopia bụ hotels nke ọnụahịa ọnụahịa, dịka ọmụmaatụ:
Hotel Caravan (Addis Ababa). Ọ dị 4 kilomita site na Airport International nke Bole na njem 15 na National Museum . Ụlọ nkwari akụ nwere ụlọ ịsa ahụ, ntutu isi, nchekwa, TV, tebụl, minibar, Wi-Fi n'efu. E nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ mmanya ụwa, e nwere ụlọ ọrụ azụmahịa, mgbanwe ego, ebe ụgbọala. Ụlọ nkwari akụ ahụ na-enyefe nnwere onwe n'efu site n'ọdụ ụgbọ elu na azụ.
Hotel Lobelia (Addis Ababa). Ụlọ nke ụlọ nkwari akụ a nwere TV, obere friji, nchekwa na ụlọ ịsa ahụ. Ndị ọbịa nwere ike iji Wi-Fi n'efu, gaa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe ahụike, sauna, na-ahapụ ụgbọ ala na-adọba ụgbọala na nzuzo.
Hotel Harbe Hotel (Lalibela). Ọ dị nanị nkeji site na isi obodo nke obodo. Obere obere ụlọ a nwere ụlọ iri na isii na mbara ala na-enweghị internet. Ụlọ ndị ahụ nwere TV satellite, ma ụlọ ịsa ahụ nwere ịsa ahụ na ntutu isi. Ihe ngosi nke ụlọ nkwari akụ bụ ụlọ elu. Ị nwere ike iri nri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na họtel ma ọ bụ jiri ọrụ nnyefe nri n'ime ụlọ gị. Maka ihe dị mma, oche n'ihu na-emeghe 24 awa n'ụbọchị, a na-enyekwa akpa nchekwa na ebe a na-adọba ụgbọala n'efu.
Hotel Goha Hotel (Gondar). Enweghị ya na etiti obodo, ma o nwere ihe ndị dị ebube na Gondar City, nke bụ otu n'ime uru ndị na-enweghị atụ. Ụlọ ndị ahụ dị mma, e nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọdọ mmiri n'èzí, ụlọ mmanya, na ebe ndị na-adọba ụgbọala.
Hotel AG Hotel Gondar (Gondar). Nhọrọ ọzọ kwesịrị ekwesị bụ ịnọrọ ruo abalị ole na ole na obodo ahụ. Ebe dị mma, ụlọ dị ọcha na nke dị jụụ, ndị ọrụ enyi na-abụrụ uru kachasị mma nke nkwari akụ ahụ. E nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ mmanya, ụlọ ntụrụndụ, ebe nchekwa na-enweghị ebe ọ bụla, yana ịntanetị.
Obodo Afrika ( Dyre-Daua ). N'obodo Afrika ị na-echere ụlọ ndị a magburu onwe ha mma, nnukwu ebe a na-ete mma, ezigbo ego maka ego. E nwere obodo dị 200 m si ahịa, ma lee, ọ na-adị jụụ ma dị mma.
Anyị atụlela naanị ụlọ oriri na ọṅụṅụ na nke dị elu. Ekwesiri ighota na na Etiopia, otutu ndi mmadu nwere ihe dika 1-2. A na-atụle ebe obibi dị otú a maka ebe obibi dị mkpirikpi, dịka ọmụmaatụ, n'oge njem site n'otu obodo gaa na nke ọzọ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ ka mma ịhọrọ hotels nke ụdị na-erughị 3 * na ọkacha mma na ebe ndị njem nleta. Ya mere inwe ike ibi n'ime ụlọ na-enweghị mmiri ma ọ bụ ọkụ eletrik ga-adị ala.
Ememe na Morocco na umu
Kedu ihe ị ga-esi na Mauritius?
Ememe na Morocco
Njem onwe onye gaa Kenya
Ejiji ejiji mmiri-okpomọkụ 2016 - akpụkpọ ụkwụ
Chicago Style na Uwe
Macaroni na cutlets
Ihe nkiri kachasị mma na akụkọ na-abụghị ndị ọkọlọtọ, akwadoro maka ilele
Agba agba na akwa
Winterwearwear - esi eji ejiji mara mma ma dị nkasi obi?
Kedu ihe bụ onye na-agwọ ọrịa?
Mmiri ara ehi maka umu
Ọkụ akọrọ nke Dog
Ememe agbamakwụkwọ na Russia
Amino acids kasị mma
Ashton Kutcher katọrọ Donald Trump maka iwu ọpụpụ ya
Tortilla na cheese
Uwe ụkwụ ụkwụ ụkwụ ụmụ nwanyị bụ ụdị ejiji kachasị mma
Ebumnobi Mexico: olee otú Frida Kahlo si emetụta ụwa ejiji?
Lenten orange mannik - ntụ ụtọ dị iche iche na-atọ ụtọ nke ihe eji emepụta ihe mbụ
Na-apụta na nshịkọ
Ocha ihe ubi
Ọ ga-ekwe omume ịlụ di na nwunye n'afọ elego?